, အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် NAB ပြရန်သတင်း - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အကယ်ဒမီဆုရအနိုင်ရထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Avid-လက်မှတ် Workspace ကို Backup ကို tool ကိုရှေးခယျြ
Home » သတင်း » အကယ်ဒမီဆုရအနိုင်ရထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Avid-လက်မှတ် Workspace ကို Backup ကို tool ကိုရှေးခယျြ
Zentropa '' မအနတ္တ '' အဖြစ် Marquis အသံလွှင့်ထံမှ Workspace ကို Backup ကိုရှေးခယျြ လွန်စွာလိုလားသော ၎င်း၏ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအလုပျအတှကျ backup လုပ်ထားဖြေရှင်းချက်
ဒိန်းမတ်အတွက် Zentropa နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်အများဆုံးဂုဏ်သတင်းကြီးသောဆုအနိုင်ရနှင့်ယနေ့အထိ 200 ရုပ်ရှင်ကျော်ထုတ်လုပ်, ဥရောပမှာရှိတဲ့ဦးဆောင် Post-ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမကြာသေးမီက၏ Backup တွေကိုယူ, Marquis အသံလွှင့်ထံမှ Workspace ကို Backup ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး လွန်စွာလိုလားသော အလုပ်လုပ်-In-တိုးတက်မှုက၎င်း၏ဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူမည့်အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များအတွက် feature ကိုရုပ်ရှင်အလုပ်က၎င်း၏အဓိကအာရုံစိုက်နေကြသည်သော်လည်း, Zentropa လည်း, ဂီတဗီဒီယိုများနှင့်အတူတီဗီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးကိုထုတ်လုပ်နိုင်အောင်အားလုံးစီမံကိန်းများနှင့်မီဒီယာဖိုင်တစ်ခုနေ့စဉ် backup လုပ်ထားပေးနိုင်ကြောင်းရိုးရှင်းတဲ့အလိုအလျောက် backup စနစ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပတေရုသ Mygdal ကုမ္ပဏီ၏ရှစ်ပြင်ဆင်ရန်အစုံများအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတာ, Zentropa ရဲ့အိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လွန်စွာလိုလားသော NEXIS စနစ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Backup တွေကိုအဘို့အတိပ်-based စနစ်များနှင့် hard drive တွေသုံးပြီးခဲ့ကြသည်ပေမယ့်ပါဝင်မယ့်သိပ်လက်စွဲစာအုပ်အလုပ်တခုရှိ၏။ ရုပ်ရှင်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးမျှမျှတတဖရိုဖရဲပစ်ခတ်မှုနှင့်တည်းဖြတ်အချိန်ဇယားရှိသည်နှင့်ငါတို့သည်မှန်ကန်စွာအရာအားလုံးကိုတက်ကျောထောက်နောက်ခံပြုဖူးသေချာစေရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့မကြာခဏလည်းကွဲပြားခြားနားသောဥရောပနိုင်ငံများရှိဒေသခံထုတ်လုပ်မှုယူနစ်နှင့်အတူစီမံကိန်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ဖို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ Workspace ကို Backup ကိုထူးခြားစီမံကိန်းများကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးကြောင်းစီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကို back up နိုင်သည်ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါဟာ install နှင့်လည်း configure လုပ်ဖို့ရိုးရှင်းသောခဲ့ပါတယ်။ "
Workspace ကို Backup ကိုအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်အစွမ်းထက်ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်စီးပွားရေးဆက်လက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် လွန်စွာလိုလားသော shared သိုလှောင်မှုစနစ်များကို။ ဒါဟာ၏အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုအသုံးပြုသည် လွန်စွာလိုလားသော အများဆုံးအရေးပါစီမံကိန်းများကိုသေချာတဲ့ backup လုပ်ထား၏သမာဓိအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုသေချာစေရန်ထားတဲ့ workspace တွေကိုချက်ချင်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီက backup ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ထုတ်လုပ်မှုမှပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ Workspace ကို Backup ကိုလည်းဖြစ်ပါတယ် လွန်စွာလိုလားသောကအတွင်းချောမွေ့စွာလည်ပတ်ကြောင်းအတည်ပြုချက်၏ကုမ္ပဏီရဲ့တံဆိပ်ကိုပေးအပ်, -certified လွန်စွာလိုလားသော ပတ်ဝန်းကျင်။
"ကျနော်တို့ကစနစ်နံပါတ်ကြည့်ပေမယ့်တကယ် Workspace ကို Backup ကိုတို့ကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြိုက်တယ် လွန်စွာလိုလားသောကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွင်းကြင်ထိုင်မယ်လို့မအနတ္တဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ကတည်းက "ပတေရုနေဆဲဖြစ်သည်။ "ငါသည်အစဉ်အဆက်သင်တန်း၏, Workspace ကို Backup ကိုသုံးစွဲဖို့ရှိသည်ဖို့ချင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကအဲဒီမှာင် သိ. ကြိုက်တယ်! ကျွန်တော်တစ်ဦး drive ကိုပျက်ကွက်ရှိသည်သို့မဟုတ်ဘာမှရဲ့မတော်တဆဖျက်ပစ်လျှင်လျှင်, ငါသည်စနစ်ဖိုင်တွေအားလုံးကို၏ဒေတာဖွဲ့စည်းပုံမှာ check လုပ်ပေးပါတယ်နှင့်ဘာမှမမှားယွင်းသည်ဆိုပါကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်ကတည်းကငါတို့သည် backup လုပ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ In-ဆိုက်ကို A / S ကိုတို့က installed နှင့်ထောက်ခံ Workspace ကို Backup ကိုထားရှိခြင်းကိုအဖွင့်ကိုထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဖန်တီးမှုဘက်အာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ tools များ၏ Marquis အသံလွှင့်ရဲ့အကွာအဝေးအကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.marquisbroadcast.com.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော Backup ကို ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ရုပ်ရှင် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Marquis အသံလွှင့် post ကိုထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows သိုလှောင်ခြင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality Workspace ကို Backup ကို Zentropa	2019-05-22
ယခင်: Todd အေလုပ်ဆောင်စရာ Reis, ASC ဒါဝိဒ်သည်လူကိုများအတွက်ကမ္ဘာနှစ်ခုကိုပုံဖျောဖို့နှစ်ခုကှတျချမှန်ဘီလူးစနစ်များကိုရွေးကောက်ပြီး
နောက်တစ်ခု: Marquis အသံလွှင့် Medway RTVE ထုတ်လုပ်မှုစနစ်က update လုပ်ဖို့ရှေးခယျြ